Uthi iyaqaqamba inhliziyo ngokuphuthwa yithuba lokudlala kwi-PSL obedlalela iThanda | News24
Durban – Lowo obengunozinti weThanda Royal Zulu, uXolani Ngcobo, uthi namanje kusenzima ukukholwa ukuthi angeke aze adlale kwiPSL ngesizini ezayo ngemuva kokuthi leli qembu lidayisele AmaZulu isikhala salo sokudlala kwiPSL, kubika iKickOff.com.
UNgcobo ubambe iqhaza elikhulu emapalini eThanda engxenyeni yesibili yeNational First Division njengoba AmaBhubesi egcine ethathe isicoco seligi maqede azitholela indawo yokudlala kwi-Absa Premiership ngesizini ka-2017/18.
Kodwa-ke uSihlalo waleli qembu, uPierre Delvaux, uvele wanquma ukudayisela Usuthu isikhala saleli qembu sokudlala kwi-Absa Premiership ngemuva kokukhala ngezindleko ezinkulu zokuphatha iqembu esigabeni esiphezulu.
UNgcobo, nowajoyina iThanda ngesikhathi kuvuleke iwindi lokuthenga kanye nokudayisa abadlali ngoJanuwari evela kwiBaroka FC, uthi abadlali abazange bacatshangelwe nhlobo ngemuva kokulwa kanzima ukuze leli qembu linyukele esigabeni esiphezulu.
OLUNYE UDABA:Iqembu laphesheya liqinisekise ukusayina umdlali weBafana
“Kubuhlungu kakhulu kodwa ayikho into engingayenza manje ngoba isinqumo sesenziwe,” uNgcobo utshele iKickOff.com.
“Kubuhlungu ngemuva kwamandla angaka umuntu awafakile.
“Kuzothatha isikhathi kumina ukuthi ngikudlulise lokhu ngoba kuzomele ngiphinde ngiqale phansi ukuze ngithole ukunyukela esigabeni esiphezulu, nokuyinto engelula.
“Lona bekuwumzuzu oshintsha impilo [kubadlali]. Kuzoba nzima ukushintsha impilo yami ngemuva kokubhekana nalokhu. Kodwa zonke izikhathi empilweni ziyadlula futhi ngithemba ukuthi nalokhu kuzodlula.”
Lo nozinti obevimbela iRoyal Eagles uthi akakabi naso isiqiniseko sokuthi uzodlala kuphi ngesizini ezayo wathi kodwa kuzoba nomhlangano phakathi kwakhe noSihlalo weRichards Bay FC, uJomo Biyela, owamthatha kwiBaroka ngesikhathi eyi-CEO yeThanda.
Kodwa uthi angeke kuze kube lula ukukhuluma naye ngoba akekho esimweni esikahle somqondo ngenxa yokuthi ubesezitshelile ukuthi ngesizini ezayo uzobe egijima esigabeni se-Absa Premiership, nokuyinto engeke esenzeka.